Ukupaka amagalaji Ukuthengisa Nokuqasha kuvuliwe Realtyww Info
Ukupaka amagalaji in London
Ukupaka amagalaji in Surrey
Ukupaka amagalaji in Staines
Ukupaka amagalaji in Folkestone
Ukupaka amagalaji in Kent
Ukupaka amagalaji in Seaford
Ukupaka amagalaji in East Sussex
Ukupaka amagalaji in North Yorkshire
Ukupaka amagalaji in Halifax
Ukupaka amagalaji in West Yorkshire
Ukupaka amagalaji in Shipley
Ukupaka amagalaji in Brighton
1 - 10 ka 660 Uhlu
Ishicilelwe ngu Blakes Chartered Surveyors Estate Agents
ukubuka Ukupaka amagalaji eshicilelwe 1 day ago
Ishicilelwe ngu Urban Spaces Lettings
Ishicilelwe ngu Parkgate
Ishicilelwe ngu S J Smith Estate Agents
Ishicilelwe ngu John Youden And Son
Ishicilelwe ngu David Jordan Estate Agents
Ishicilelwe ngu Ernest Wilson
ukubuka Ukupaka amagalaji eshicilelwe 2 days ago
Ishicilelwe ngu Auction House West Yorkshire
Ishicilelwe ngu My Lets
Igalaji lokuhlala (/ ˈɡærɪdʒ / noma / ɡæˈrɑːʒ /) liyisakhiwo esakhiwe ngodonga, esibekiwe sogcina imoto noma izimoto ezingase zibe yingxenye noma zinamathiselwe ekhaya ("igaraji elinamathiselwe"), noma okwakhiwa okuhlukile noma okuchithiwe ("kuvinjelwe egalaji "). Amagalaji okuhlala ngokujwayelekile anendawo yemoto eyodwa noma ezimbili, yize kusetshenziswa amagalaji ezimoto ezintathu. Lapho igalaji linamathele endlini, igalaji linomnyango wokungena endlini. Imigwaqo ejwayelekile inomnyango obanzi ongaphakanyiswa ukuze kuvunyelwe ukungena nokuphuma kwemoto, bese kuvalwa ukuvikela imoto. Igalaji livikela imoto ekungeneni kwemvula, futhi, uma ifakwe umnyango wokukhiya wegaraji, iphinda ivikele nemoto (s) ekwebiweni nasekonakaleni. Amagalaji asetshenziselwa futhi amaphrojekthi ahlukahlukene kufaka phakathi ukupenda, ukwenza izinkuni nokuhlanganisa amaphrojekthi.